Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G75S - China Tianjin Oilbayer S & T
Isifinyezo OBC-G75S uhlobo polyvinyl utshwala uketshezi ukulahlekelwa okufakiwe. Esikhathini lokushisa 20 kuya 115 ℃, kungaba ukulawula ngempumelelo ukulahlekelwa uketshezi, ukunciphisa amanzi khulula, ngcono isiphetho ukuzinza usimende slurry sika. It Ubuye esihle anti- wokudlulisela umsebenzi. OBC-G71S ingasetshenziswa kuphela by kuhlangana ezomile. It ucela zisebenzisa angenasawoti ukuxubanisa slurry. Futhi kungaqali anti-usawoti. Ukusetshenziswa ububanzi lokushisa: 20 ℃ ~ 115 ℃ (BHCT). Isikali ezinconyiwe: 2.0 ~ 3.0% (BWOC). Kusebenza e gcwele hlobo of usimende slurry izinhlelo, w ...
OBC-G75S uhlobo polyvinyl utshwala uketshezi ukulahlekelwa okufakiwe. Esikhathini lokushisa 20 kuya 115 ℃, kungaba ukulawula ngempumelelo ukulahlekelwa uketshezi, ukunciphisa amanzi khulula, ngcono isiphetho ukuzinza usimende slurry sika. It Ubuye esihle anti- wokudlulisela umsebenzi. OBC-G71S ingasetshenziswa kuphela by kuhlangana ezomile. It ucela zisebenzisa angenasawoti ukuxubanisa slurry. Futhi kungaqali anti-usawoti.
Izinga lokushisa: 20 ℃ ~ 115 ℃ (BHCT).
Isikali ezinconyiwe: 2.0 ~ 3.0% (BWOC).
Kusebenza e gcwele hlobo of usimende slurry izinhlelo, okuyinto akhiwa ngu zebanga ngalinye lamafutha-kahle usimende (kuchazwe APISpec10A) nezinye izithasiselo (njengawo Silicon powder, ukuzulazula ubuhlalu, flyash, bentonite, barite ubhuqu hematite).
White noma mpunga powder esinsundu
Okulandelayo: Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G80L
Spacers KANYE ukushiselwa-OBC- W24L
Fluid Ukulahlekelwa izithasiselo-OBC-G80L
Spacers kanye ukushiselwa-OBC-S32S